Ọdịnaya 4.0 Site Dị Nnọọ Nye Ọtụtụ | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Amaghị m na ọdịnaya na-agbanwe n'ezie dị ka Infographic a ga-esi kọwaa, mana ekwenyere m na enwere asọmpi na-enweghị atụ maka nnukwu ọdịnaya na teknụzụ na-agbanwe n'ike n'ike nke chọrọ azụmaahịa itinye ego na ọdịnaya dị ukwuu. Ma ọ bụ… dị ka Ọdịnaya 4.0 ga-akọwa ya… Egwu diri otutu!
site Igatin 2012: A isi ala jidere na-ewere ọnọdụ maka ndị na-azụ ahịa dijitalụ. Dị azụmahịa na-agbanwe ngwa ngwa. A na-emepe teknụzụ site na ịkwụ ụgwọ ekwentị gaa na azụmahịa micro-ọzọ dị ka atụmatụ ntinye ego maka mgbasa ozi na nkwụ ụgwọ. "Media" anaghịzị agụnye naanị ọdịnaya, kamakwa azụmahịa, ịkwụ ụgwọ, na nyiwe.
Ozi nkowa mgbakwunye site IGWE, ogbako nke Business Insider mepụtara na New York site na November 27-28, 2012.
Obodo Tech Marketing
Sep 5, 2012 na 6: 07 AM
N'ezie, site na Social Media, mmadụ niile jikọtara ibe ha, ị nwere ike gbasaa ọdịnaya gị mfe. Ọ na-aghọ malitere ịrịa.
Sep 5, 2012 na 1:02 PM
Achọrọ m ịnweta ụfọdụ infographics mebere ASAP, nke gị dị mma!
Sep 5, 2012 na 3:23 PM
Hi Steven, ihe omuma ihe omuma anyi nile sitere DK New Media: http://www.dknewmedia.com/